Breaking लक्ष्मी पुजाकै दिन आमा/छोरी माथी श्रीमान/बुवा वाटै एसिड प्रहार, दोषी पक्राउ, यस्तो छ नालेबेली
जनकपुरधाम, कात्तिक २९ : आज लक्ष्मी पुजाको दिन । नारी रुपी माता श्री लक्ष्मीको पुजा आराधना र उत्सव गर्ने दिन । आजको दिन आफनै श्रीमानले एसीड प्रहार गर्ने कल्पना सायदै कुनै पनि नारीको लागि स्वभाविक होला । तर यस्तै भएको छ धनुषा मात्र नभई प्रदेश २ को केन्द्र जनकपुरधाममा । जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका वडा नं. ७ की २० वर्षिय आरती देवी साह माथी सुनचाँँदी कारीगरले प्रयोग गर्ने एसीड प्रहार भएको छ ।
आरती मात्र होइन एसीड उनको काँखमा रहेको ३ वर्षिय अर्की चेली (उनकी छोरी) रिया लाई समेत बक्सेन । एसीड प्रहारले आरतीको टाउको देखि ढाँडसम्म आधा अंग (प्रहरीका अनुसार ७५ प्रतिशत) अंगभंग भएको छ । छोरी रियाको टाँउको र बाँया हात समान्य जलेको छ । लक्ष्मी रुपी छोरीलाई बुवाले लक्ष्मी पुजाकै दिन एसीड प्रहार गरेको घटना अकल्पनीय छ । माइतीमा रहेकी आरती आज लक्ष्मी पुजाको तयारी स्वरुप घर सफाई गर्दै गर्दा सुनचाँदी कारीगढ समेत रहेका आरतीको श्रीमान संजिव साह अचानक एसीड प्रहार गरेको धनुषा प्रहरीको भनाई छ ।
पक्राउ परेका साह जिल्ला प्रहरी धनुषामा
यस्तो घटनाको नालेबेली
एसीड प्रहारको आरोपमा उनकै श्रीमान पक्राउ परेका छन् । विहान साढे आठ बजे घटना भएकोमा प्रहरीलाई साढे १० बजे जानकारी भएको र अनुसन्धान हुदै जाँदा सावा ११ बजे ओरोपित साह जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका वडा नं. ४ वाट पक्राउ परेका छन् । आरती र संजीव बिच आपसी मतभेद बढदै झगडामा परिणत भइसकेको र उनीहरु जिल्ला प्रहरी कार्यालय सम्म पुगेर दुवै जना समबन्ध विच्छेदको तयारीमा समेत रहेको पारिवारिक स्रोतको भनाई छ ।
आरोपित साहलाई जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषाको क्राइम ब्रान्चका प्रहरी नायव निरिक्षक रामनेक यादव, प्रहरी हबल्दारहरु मनोज महतो, श्रीराम यादव, सुरेन्द्र राम सहितको टोलीले पक्राउ गर्न सफल भएको छ । आरतीको उपचारमा खटेका जानकी हेल्थ केयरका चिकित्सक डा. आदित्य यादवले शरिरको दाँया भागमा ढाँड भन्दा माथी अधिकांश भाग जलेको र अवस्था नाजुक रहेको बताउछन् ।
Tags: लक्ष्मी पुजाकै दिन अपराध